सैनिक संग्रहालय : थरिथरिका हतियारदेखि महेन्द्रको रोयल्स रोयससम्म (फोटोफिचर)- फोटोफिचर - कान्तिपुर समाचार
वैशाख ३१, २०७६ गोविन्द पोखरेल
काठमाडौँ — गेहेन्द्र शमशेर नेपालका पहिलो वैज्ञानिक हुन् । उनले नेपाली सेनाका लागि विभिन्न हतियार बनाए । उनले बनाएको हातहतियार तथा हतियार बनाउने मेसिनहरु हेर्न पाइएला भन्ने तपाईमा जिज्ञासा हुनसक्छ । भनिन्छ, देश बुझ्नु छ भने कि त घुम्नु कि त संग्रहालय जानू । संग्रहालय इतिहासको द्योतक हो, विगतलाई सुरक्षित राखिएको हुन्छ । गेहेन्द्र शमशेरका ती हतियार र मेसिनहरु अहिले पनि सुरक्षित छन् संग्रहालयमा ।
प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७६ १८:२३
नेपालमा तत्कालीन् राजाहरुले बाहेक कसैले पनि रोयल्स रोयस कार चढेका छैनन् । पैसा भएर पनि किन्न नसकिने यो गाडी नेपालमा पूर्वराजा महेन्द्रले चढ्थे । त्यो गाडी अहिले कहाँ होला ? यस्ता जिज्ञासा मेटाउनु छ भने छाउनीस्थित सैनिक संग्रहालयमा जाँदा हुन्छ ।
रोयल्स रोयस तत्कालीन राजा मेहन्द्रलाई २०१७ सालमा बेलायती महारानी इलिजाबेथ द्वितीयले उपहार दिएकी थिइन् । यो नेपालमो पहिलो रोयल्स रोयस हो । २०१७ सालको यो गाडी अहिले पनि उस्तै चमक छ ।
गेहेन्द्र शमशेरले सन् १९५३ मा बेलायतबाट झिकाएका मार्टिन हेनरी राइफलको गोली बनाउने मेसिनहरु संग्रहालय अगाडि सजाएर राखिएका छन् । त्यसबेलाका मेसिनहरु अहिले पनि झट्ट हेर्दा नयाँ जस्ता देखिन्छन् ।
संग्रहालयलामा नेपाली सेनासँग सम्बन्धित इतिहास तथा जानकारीसमेत सर्वसाधरणले लिन सक्छन् । त्यस्तै नेपालका तत्कालीन राजाहरु,विभिन्न किल्ला र युद्ध सामग्री, सैनिक पोशाक, पदकहरु देख्न सकिन्छ । संग्रहालयमा नेपाली सेनाले प्रयोग गरेको एनए०१४ विमान पनि राखिएको छ ।
२०५७ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको जन्मोत्सवको अवसर यो संग्रहालयको शिलान्यास गरिएको हो । संग्राहलय सर्वसाधरणका लागि खुला गरिएको भने २०६४ सालदेखि हो ।
अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराउन निर्देशन
वैशाख ३१, २०७६ हरिराम उप्रेती
गोरखा — अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले निर्देशन दिएको छ । गोरखा नगरपालिका-१० छेवेटारमा सञ्चालित गोरखकाली क्रसर उद्योग बन्द गरी यथाशीघ्र जानकारी गराउन उद्योग सञ्चालक सुरेन्द्र कुँवरलाई गत सोमबार घरेलुले पत्र काटेको हो । उनले स्थानीय राजनीतिक दलका नेताहरुसँगको मिलेमतोमा अवैध ढङ्गले झण्डै डेढ वर्षदेखि क्रसर चलाउँदै आएका थिए ।
उद्योगको नवीकरणसमेत २०७४ मंसिर ४ गते समाप्त भइसकेकाले उद्योग बन्द गर्न भनिएको छ । उक्त पत्र गण्डकी प्रदेशस्थित मुख्यमन्त्री, उद्योगमन्त्री, गोरखा नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी कार्यालय र अख्तियारमा समेत जानकारीका लागि बोधार्थ पठाइएको छ । उक्त उद्योग साविकको देउराली गाविस-८ को कित्ता नम्बर ५२९ मा दर्ता छ । तर, क्रसर सञ्चालक सुरेन्द्र कुँवरले ठाउँ सारीको आवश्यक कागजपत्रबिनै छेवेटारमा उद्योग सञ्चालन गरेको पाइएको प्रमुख उद्योग अधिकृत नवराज राउतले बताए ।
देउरालीको हरिमानसिं बस्नेतको नाउँमा रहेको उद्योग कुँवरले २०७४ वैशाख ५ मा नामसारी भने गरेका छन् । 'उद्योगको फाइल अध्ययन तथा स्थलग निरीक्षण अनुगमन गर्दा कुँवरको नाउँमा नामसारी भए पनि ठाउँसारी नभएको पाइयो,' राउतले भने । यसअघि उद्योगको ठाउँसारीको यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउन सरोकारावाला निकायले पत्र काटे पनि कुँवरले अटेरी र बेवास्ता गर्दै आएका थिए । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्गनसमेत नगरी उनले विद्यालय र स्थानीयवासीको खेतलाई समेत असर पर्ने गरी क्रसर चलाएका हुन् । त्यस्तो उद्योग बन्द गरी जानकारी गराउन भनेको राउतले बताए । 'अटेर गरे प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्छौँ,' उनले भने ।
कुँवरले सरोकार राख्ने कार्यालयलाई विवरण बुझाउँदा पनि झुटा कागजपत्र पेस गरेको पाइएको छ । 'फाइल अध्ययनको क्रममा नामसारी हुँदाको कित्ता नं. ५२९ एकीन नगरी गोरखा नगरपालिका-१० मा पर्छ भन्ने मात्र उल्लेख भएको प्रमाणपत्र बुझाएको पाइयो,' उनले भने, 'यथार्थमा उक्त उद्योग नामसारी मात्र भएको ठाउँसारी नभएको देखिन्छ ।' अवैध उद्योग सञ्चालन भएको चौतर्फी गुनासो बढेपछि जिल्ला प्रशासन लगायतका सरोकारवाला निकायले पत्र काट्दा गोरखा नगरपालिका-१३ मै उद्योग सञ्चालन भएको भन्दै झुटा विवरण पेश गरेको पनि पाइएको छ ।
२०७५ जेष्ठ १७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखालाई सम्बोधन गरी लेखिएको पत्रमा देउरालीमै उद्योग सञ्चालन रहेको उल्लेख छ । 'जिल्ला प्रहरी कार्यालयले २०७५ चैत १० गते यथार्थ विवरण खुलाइ पठाइदिने पत्रमा ठाउँसारीमा पनि ठीक चिन्न लगाएर पेस गरेको देखिन्छ, तर उद्योगको कार्यालयमा रहेको फाइल अध्ययन गर्दा नामसारी मात्र देख्यौँ,' क्रसर संचालक कुँवरलाई काटिएको पत्रमा भनिएको छ ।
०७४ असार २७ गते उद्योगको यथार्थ ठेगाना जानकारी गराउन पत्र काट्दा पनि उनले कार्यालयलाई अटेरी र बेवास्ता गर्दै आएका थिए । 'सम्पूर्ण तथ्य हेर्दा प्रक्रिया पुगेको छैन, क्रसर उद्योग गोरखा नगरपालिका-१० छेवेटारबाट यथाशीध्र दर्ता भएको स्थान साविकको देउराली गाविस-८ (हाल गोरखा नगरपालिका-१३) को कित्ता नम्बर ५२९ मा आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याइ सार्न निर्देशन दिएका छौँ,' राउतले भने ।
प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७६ १८:०६